Ny tombontsoa iraisana no laharam-pahamehana, hoy ny eo anivon’ny minisiteran’ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy tamin’ny alalan’ny Tale jeneralin’ny fanajariana ny tany. Honeran’ny fanjakana ny fanesorana ireo fianakaviana voakasika ary hamoraina ny fialan’izy ireo amin’ny toerana. Miantso ireo voakasika rehetra ireo mba hanaiky ny fiaraha-miasa hanafainganana ny dingana mba hahafaha-manatontosa haingana ilay tetikasam-pampandrosoana ny fanjakana. Miankina amin’ny tombam-bidin’ny fananana ho rava ny fanonerana, ary ambara fa ny 20% amin’ny dingana araka ny lalàna hahafaha-manala ireo olona no efa vita amin’izao fotoana. Miahiahy fatratra amin’io resaka fanonerana io anefa ny ankamaroan’ireo tsy maintsy horavana ny tranony. Ankoatra ny fahabetsahan’ny dosie, tena sarotra ihany koa ny famoronana sy fanamboarana azy ireny. Manahy ny tsy hahazoana na fitarazohan’ny fanonerana ara-bola azy ireo ny ankamaroan’ireo voakasika.